पाचनप्रणलीमा खराबी आउन नदिन हरेक दिन अपनाउनुहोस् यी उपाय,मिल्नेछ यस्ता रोगबाट छुटकारा - BM Nepal
पाचनप्रणलीमा खराबी आउन नदिन हरेक दिन अपनाउनुहोस् यी उपाय,मिल्नेछ यस्ता रोगबाट छुटकारा
काठमाडौँ । अहिलेको आधुनिकतासँगै मानिसको चालचलन तथा खानपिनमा परिर्वतन भइरहेको छ । त्यसकारण मानिसको स्वास्थ्यमा धेरै समस्याहरु आउने गरेका छन् ।
आज हामी मुख्य गरेर पाचन प्रणाली कसरी राम्रो बनाउने ? भनेर तपाई सामु चर्चा गर्ने प्रयास गर्दछौ । स्वास्थ्य हाम्रो पाचनप्रणालीमा खराबी आउनुको खानपान र दिनचर्या नै हो ।
बिहान पेट सफा नहुनुको मुख्यकारण हामीले खाने खान तथा आनीबनीका कारण हुन्छ । यदि हामी समयमा स्वस्थकर खाना खान्छौं भने कुनै औषधी नखाई पनि समस्या समाधान हुन सक्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले राति सुत्नुभन्दा तीनघन्टा अगाडि नै खाइसक्नुपर्छ । अन्यथा क्यालोरी बर्न हुन पाउँदैन । खानामा फाइवरयुक्त कुराहरु अत्यधिक सेवन गर्नुपर्छ ।
दिनभरीमा ८ देखि १० गिलास पानी पिउनैपर्छ । साथै, दैनिक योग र व्यायाम गर्नु पनि आवश्यक छ ।यसबाट आन्द्राको राम्रोसँग सफाई हुन्छ ।
खानामा रुचि घट्दै गएको त छैन ? सर्तक रहनुहोस् ! हुनसक्छ पेटको…
बज्रासन गर्ने तरिका
खाना खाएपछि चकटी ओछ्याएर बसौं । दुवै घुँडालाई मोड्ने र हत्केलाको बलले बस्नुपर्छ । दुवै खुट्टाका औंलाहरु आपसमा मिलेको हुनुपर्छ र कुरकुच्चामा अलिकति दूरी हुनुपर्छ । शरीरको पूरै भार खुट्टामा सार्ने । बज्रासन गर्ने क्रममा कम्मरलाई एकदम सिधा राख्नुपर्छ । यही अवस्थामा दस मिनेट बस्ने र लामो–लामो सास लिनुपर्छ । बज्रासनको दौरान शरीरको मध्यभागमा सबैभन्दा बेसी दवाव पर्छ । यसबाट पेट तथा आन्द्रामा हल्का दबाब पर्छ जसले गर्दा कब्जियतको समस्या हट्छ।
स्वाद लिएर खाने
अन्यत्र भुलेर नखाने
चिसो पेय नपिउनुहोस्
सहि समयमा भोजन
साह्रो वा काचो नखानुहोस्
Prev यस्तो समस्या भएका व्यक्तिले कदापी नखानुहोस् कागती झन् बल्झिने छ यस्तो रोग
Next खानामा रुचि घट्दै गएको त छैन ? सर्तक रहनुहोस् ! हुनसक्छ पेटको क्यान्सरको लक्षण